Nnukwu data na ọdịnihu na amụma ihu igwe | Netwọk Mgbasa Ozi
Nnukwu data bụ njikọ ikpeazụ na ịkọ ọnọdụ ihu igwe. Gburugburu ụwa, ọtụtụ puku ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ sayensị, ụlọ ọrụ, wdg, na-eji Big Data ịchọta usoro dị iche iche ebe ọ bụla ha nọ, nnukwu data. Na meteorology, sayensị nke nwekwara nnukwu data na data dị ukwuu, Big Data nwekwara ngwa ya bara uru. Nke a Oge a na ngwa ọrụ dị ike, enwere ike iji ya n'ọtụtụ ụzọ. N'agbanyeghị na akpọrọ gị dịka otu ihe, ị nwere ike nweta ọtụtụ amụma dị iche iche dabere na ihe ị na-achọ. N'ezie, ọ bịakwara ihu igwe, ma lee, anyị ga-agwa gị ihe ọ na-eme na otu esi eme ya.
Nke mbụ, ka anyị cheta nke ahụ ịtụ anya oge abụwo otu n'ime isi mkpa ụmụ mmadụ. Ọtụtụ puku afọ gara aga, amụma ihu igwe dị ezigbo mkpa, ọbụlagodi taa, maka nlanarị. Nzụlite nkà na ụzụ abụghị ihe na-egbusi oke, enweghị nsogbu ọ bụla nwere ike inwe nnukwu nsogbu. Ọ bụ ezie na mkpa a dị mgbe niile iji gbochie ihu igwe, ọ bụ mgbe Aristotle bịarutere ka anyị nwere ike iwepụta okwu ahụ bụ ihu igwe. Ọ kpọrọ ya "meteorological", aha ọ gụrụ akwụkwọ ya, n'ihe dịka 340 BC.
1 Nnukwu data na amụma
2 Kedu ka Big Data si arụ ọrụ?
2.4 Adighi ike
2.4.1 Ihe Nlereanya na eziokwu nke data
3 Kedu ka esi enweta ya?
3.1 Ihe ngbanwe nwere ike buru oke
3.1.1 Elu ọnụ na-agbanwe agbanwe
3.1.2 Ndị na-agbanwe agbanwe dị iche iche
3.2 Ihe mgbanwe nwere ike ịbụ ọnụọgụ
3.2.1 Nọmba ọnụọgụ na-aga n'ihu
3.2.2 Pụrụ iche variables
3.3 A na-edozi mgbanwe niile
4 Nnukwu data dị ka ọzụzụ nwata
5 Nnukwu data megide mgbanwe mgbanwe ihu igwe
6 Nnukwu data n’ọdịnihu nke ihu igwe na ndụ anyị
Nnukwu data na amụma
Echiche nke omume ikuku akwụsịbeghị itolite kemgbe ahụ. Oge ọ bụla ngwa ngwa. Na-aga site na temometa nke Galileo chepụtara na 1607, gaa na ntanetị sitere na data anakọtara site na satịlaịtị. Ugbu a, anyị na-eche nnukwu data ihu, ọtụtụ kwenyere na ọ bụ ihe kasị revolutionary ngwá ọrụ ebe ọ bụ na internet dị ma ọ bughi obere. Dị ka a ga - asị na ọ bụ ọdịnihu sayensị, taa anyị nwere ike ịsị na ọ dị adị.
Dika anyi kwurula, Big Data bidoro buru oru taata, nke inye ndi nlekota onodu ubochi anya nke ozo. Ebe ha na-enweghị ike ịga, ma ọ bụ kwenye na ha ziri ezi na-enweghị, Nnukwu data na-egosi gị ihe zoro ezo ma ọ bụ nke a na-ahụghị, jikwa ogo larịị nke iru ya erubeghị. Enwere ụlọ ọrụ na-enyeworị ọrụ ndị a taa. Itlọ ọrụ, gọọmentị na ụlọ ọrụ ndị na-eji nnukwu data atụ anya ihu igwe. Ma olee otu usoro a dum si dị? Kedu ka esi eme ya? Olee uru anyị na-erite? Ọzọ anyị ga-ahụ ma ghọta etu usoro niile nke teknụzụ ọhụụ ga-esi kwe omume.
Kedu ka Big Data si arụ ọrụ?
Ikekwe, Nnukwu data na-ele anya na mbara igwe iji lekwasị anya na data, nakwa na ha na-arụ ọrụ nke ọma. Yabụ ka ị nwee ike ịghọta karịa etu o si metụta ihu igwe, ị ga-ebu ụzọ kọwaa etu o si arụ ọrụ.
Nnukwu data nwere isi ọrụ na ihe a na-akpọ 4 V's.
Nke a pụtara ọnụọgụ data. Ihe anakọtara data a niile bu ihe a maara dika olu. O nwere ike ịdị iche dabere na etinyere ya, oge ụfọdụ anyị nwere ọtụtụ data na oge ndị ọzọ "pere mpe". Nke ahụ bụ, anyị nwere ike ịga site na nde data 1.000 ruo ọtụtụ puku ijeri, dabere na nke a nyochara.
Echere m ọnụego nke emere data. Ha sitere na mkpa ijide ha, chekwaa ma hazie ha. Ihe ndekọ data ndị ọzọ nwere, ngwa ngwa ha na-echekwa, ka a na-enyocha ya. Ọsọ dị mkpa okpukpu abụọ na amụma ihu igwe, ebe ọ bụ na ihe omume na-eme n'oge, ma a ga-edozi ya ozugbo enwere ike.
Mgbe ụfọdụ enwere usoro etu data ahụ si abịa, oge ndị ọzọ. Typedị data ọ bụla nwere nhazi nke ya. Oge ndị ọzọ ụfọdụ na-efu (enwere usoro iji dozie nke a, ma ọ bụ njehie ga-abụ nnukwu) na oge ndị ọzọ ha na-abịa n'ụdị vidiyo ọbụlagodi. Enwere otutu data dị iche, nke na Big Data na-ahụ maka ịnye iwu, mgbagha iji nyochaa nke ọma. Dịka ọmụmaatụ, a gaghị etinye nha okpomọkụ sitere na temometa "enweghị ike" n'otu ngwugwu dị ka nha satellite site na ihu.
Njikọ nke nne na nna nke gara aga mgbe. Ọ pụtara na data mechara bịa dị ọcha, na-enweghị ihe "dị egwu". Ndị otu Big Data management ga-enwerịrị otu ndị na-anaghị ele mmadụ anya n'ihu zụrụ azụ iji lebe ezigbo usoro. Nsonaazụ nke eziokwu dị njọ nke data nwere mmetụta dị njọ. Iji nweta echiche, ọ ga-adị ka otu ndị na-arụzi ụgbọala rụzigharịrị otu ụgbọala, ha chefue ịkpụgharị ụkwụ abụọ.
Ihe Nlereanya na eziokwu nke data
Anyị nwere ọtụtụ ndekọ sitere n'ọtụtụ mpaghara. Ka anyị were ya na anyị nwere okpomọkụ, iru mmiri, ikuku, wdg. Ma, anyị nwere ọdịda, anyị na-efu ụfọdụ ndekọ okpomọkụ maka mpaghara ụfọdụ, maka ebumnuche ọ bụla, anyị enweghị ike ịnweta ịmata ọnọdụ okpomọkụ edere. Anyị nwere ngụkọta nke data 30, na abụọ n'ime ha, na-enweghị ọnọdụ okpomọkụ n'ikpeazụ.
Ihe enwere ike ime, dịka ọmụmaatụ, bụ ịgbakọ nkezi okpomọkụ nke mpaghara ndị ahụ iji chọpụta kpọmkwem ọnọdụ okpomọkụ enwere ike ịgụta na ndekọ na-efu, mana yana obere oke njehie. Ueskpụrụ bụ akụkụ ahụ mapụtara, na mgbe ahụ na ngụkọta oge nwere ike itinye n'ọrụ. A sị na data a na-efu efu, kọmpụta ndị ahụ agaraghị amata ya, ịmepụta oghere ojii na data ahụ, na amụma amụma na-ezighi ezi.
Kedu ka esi enweta ya?
Na ihu igwe, dika odi n'ubi obula, data na-abata n'ụdị mgbanwe. Nke ahụ bụ, a na-ahazi nke ọ bụla n'ụzọ ọ dị na ya. Ọ bụ ezie na ọ dị ka ihe agbachapụrụ agbacha ma gbagwojuru anya, ọrụ a ga - adị "mfe" maka ndị nyocha Big Data Ihe mgbanwe ndị anyị nwere ike ịdekọ na ihu igwe, ọ bụ ezie na ha ka bụ data, ha nwere ike ịbụ n’ezinụlọ dị iche iche. Nke ahụ bụ, ihe na-agbanwe agbanwe bụ data ọ bụla enwere ike ịkekọrịta, mana ha anaghị adị otu.
Oyiyi di n’elu, nke NASA nyere, gosiri ihe omuma atu nke uwa nile. N’ihe banyere NASA, ha nwere ọtụtụ satịlaịtị na-enye ha ohere ileba ma tụọ ihe ịtụnanya gburugburu ụwa n’oge.
Nnukwu data nwere ike gụọ akara ọ bụla nke ihe na-ahapụ banyere ihe, na na ike ga-atụle data. Ọtụtụ mgbe ha na-eche maka Big Data, ha ga-eche ngwa ngwa banyere mgbe anyị na-eji ekwentị mkpanaaka, sọfụ ịntanetị, pịa na ibe, zụta ihe n'ịntanetị, ma ọ bụ "dị ka" ya na Facebook. Nke ahụ bụ sọftụ "pere mpe" mana ọ bụ ok, ee, enwere ntụkwasị obi nke ọma na nzuzo. Mana n'aka nke anyị, anyị na-ahapụ ụzọ anụ ahụ / nka, dị ka ọnọdụ GPS nke ebe anyị nọ, ekele maka ekwentị mkpanaaka. N'ebe a, anyị amaliteworị ịgwakọta ụwa nke mebere na nke nkịtị. Na n'ezie, mmegharị ahụ, ịzụrụ ihe, dabere na afọ, ihe anyị họọrọ, a na-edebe ihe a niile oge niile, na n'ezie, ọ nwere ike ịtụgharị gaa na ọtụtụ data.
Ihe ngbanwe nwere ike buru oke
Ablesdị mgbanwe dị iche iche bụ ndị na-anọchi anya ụkpụrụ ma ọ bụ mgbanwe dị oke mkpa nke na-apụtaghị oke oke. Ha na-anọchite anya ogo nke ihe ha kọwara. Ihu ọma ha bụ oke nke ihe ha na-anọchi anya ya. Enwere ike ịkekọrịta ha n'ọhịa abụọ.
Elu ọnụ na-agbanwe agbanwe
Ha bụ ndị ahụ na-anọchi anya ihe n'otu ubi na-enweghị njikọ ezi uche dị na ya onye obula. Iji maa atụ: Aha mpaghara ndị na-egosi ebe ihe ndekọ a si, dị ka obodo, obodo kwụụrụ onwe ya, koodu nzi ozi, wdg.
Ndị na-agbanwe agbanwe dị iche iche
Ha bụ ndị ahụ nwere ike na-anọchite anya ịdị ukwuu nke ihe, dị ka Douglas n'ọtụtụ na ebili mmiri, ọkwa nke ọnụ ọgụgụ nke enwere ike ịkọwa oke oke dị ka ịdị ukwuu ha, wdg.
Ihe mgbanwe nwere ike ịbụ ọnụọgụ
Ọnụọgụ mgbanwe bụ ndị ahụ na-anọchi anya ụkpụrụ ma ọ bụ mgbanwe dị iche iche ma dị nfe. Ha na-anọchi anya ụkpụrụ ọnụọgụ. Ihe ha bu bu na ha nwere ike igosiputa otutu nha na ihe omimi nke ihu igwe. Ejiri ha uzo abuo
Nọmba ọnụọgụ na-aga n'ihu
Ndị na-agbanwe agbanwe na-aga n'ihu bụ ndị ahụ ha na-ahụ maka ịlele ihe guzosiri ike. Ihe omuma atu nke ha bu akwukwo iru mmiri, okpomoku, ikuku ikuku, oke mmiri ozuzo, wdg.
Pụrụ iche variables
Ndị a bụ ndị ha na-edekọ ihe guzosiri ike. Ya bụ, ugboro ole mmiri zoro n’ime otu afọ n’otu ógbè, ugboro ole ọ mere ka mmiri zoo, wdg.
A na-edozi mgbanwe niile
Ozugbo a kọwapụtara ndị niile nwere mgbanwe ahụ, ha na-arụ ọrụ maka kọmputa, ndị nyocha na-achịkwa mgbe niile nke Nnukwu data. Ruo afọ ole na ole gara aga, ọnụọgụ data dịnụ, n'agbanyeghị na ọ bụ ọnụ ọgụgụ dị oke ukwuu, enweghị nsogbu ndị nyocha data ga-enyocha. Nnukwu data nyocha, Otú ọ dị, bụ maka nyocha nke oke data a, ebee usoro nyocha nke a na-ahụkarị ruo taa, ga-ewe ogologo oge (anyị na-ekwukarị maka ụbọchị) iji nye azịza. Ọbụghị naanị nke ahụ, Nnukwu data na-arụ ọrụ nke ọma ma zie ezi, site na "igwu egwu" ya na mgbanwe dị n'etiti ha.
Ihe a niile malitere ihe anyị kwurula na mbụ maka 4 V nke Big Data, na-enweta ọsọ, ntụkwasị obi na ụdị ihu igwe na-enye amụma dị oke mma na obere oge.
Nnukwu data dị ka ọzụzụ nwata
Ezigbo ihe atụ ga-ekwu maka ụlọ ọrụ ACCIONA, nke nwere a Controllọ Ọrụ Njikwa Ike Ọhụrụ (CECOER). Ọ bụ ụlọ ọrụ kasịnụ n’ụwa ebe ebumnuche bụ inye ihe ngwọta na oge, nke nde nde data anakọtara site na akụrụngwa ya, ma biomass, ifufe na ike anyanwụ. Ọ na-ewepụta ihe nhazi 3000 kwa afọ nke were data a niile iji dozie mkpa achọrọ. Ọzọ uru nke CECOER bụ n'ikuku nke mere na ha nwere site na ha akụrụngwa, si otú 50% nke ha na-edozi remotely. Ihe fọdụrụ na 50% na-edozi ahụ site n'aka ndị ọrụ. N'ụzọ nke a, Acciona na - enweta ume ọhụrụ ya, karia ibu ike ozo, taa bụ azịza.
Eziokwu ọzọ dị mkpa gbasara Big Data taa bụ ụkọ nke ndị ọkà mmụta sayensị data. Ọ bụ ala gbara ọsọ, na nke ahụ abanyela n'ụkpụrụ ụfọdụ dị mbụ. Ndi nnukwu data nwere ike inyere aka na mmalite nke amụma, kọọrọ ndị ụlọ ọrụ uru, nwee ike ịtụ anya ọtụtụ ihe ma kwenye ụgwọ nke nyocha data buru ibu? E-e mana ọ bụ ihe a hụrụla obere obere. Ọchịchọ a na-arịwanye elu maka ndị ọkà mmụta sayensị nwere ihe yiri nke ahụ nakwa site n’ịghọta mkpa ọ dị ha n’ebe niile. Ọ bụ eziokwu na enweela ọtụtụ ndị otu Big Data na-arụ ọrụ, nwere nsonaazụ dị egwu, mana ọ bụ ugbu a ebe anyị hụrụ na enwere mkpa ka ukwuu. A na-achọsi nnukwu ndị na-enyocha data ike.
N'ihi ya anyị na-ebi mgbanwe na ha na-egosi na mmepe, edi toto ke editọn̄ọ. Dị ka ụlọ ọrụ ọ bụla, anyị na - agba ama ugbu a maka ike ya, mana enwebeghị nke ọma, nke a bụ ihe oge na - echere anyị. Otu ihe apụtaworị, ikike ọ nwere ugbu a, nke ọzọ, ogologo oge ọ nwere ike ịga. Nsonaazụ gị agaghị ahapụ anyị enweghị mmasị.
IBM nlereanya maapụ
IBM's The Weather Company bụ ụlọ ọrụ nzuzo nke na-enye amụma ruru nde 26 kwa ụbọchị banyere ihu igwe. IBM site na mbido eguzosie ike, yana Google, maka ịbụ otu n'ime ụlọ ọrụ ndị ọsụ ụzọ kachasị n'ọhịa. Welọ Ọrụ Weather na-agbasi mbọ ike iji nyere ndị mmadụ aka ịme mkpebi gbasara ihu igwe. Ọ bụ netwọkụ kachasị na ụwa nke ọdụ ụgbọ elu nke onwe. Brandsdị kachasị elu n'ụwa n'ụgbọ elu, ike, mkpuchi, mgbasa ozi na gọọmentị dabere na Welọ Ọrụ Weather maka data, nyiwe teknụzụ na ọrụ.
Nnukwu data megide mgbanwe mgbanwe ihu igwe
Ọchịchị United Nations Global Pulse, ihe omuma banyere data nke United Nations na Western Digital Corporation, abanyela aka na njikọ aka ịlụ ọgụ ọnụ megide mgbanwe ihu igwe. Ọrụ a nke UN na Western Digital Corp na-eduzi, mee ka ndi ohuru ohuru ohuru si gburugburu uwa gbakota iji wakpo nsogbu ahụ n'ụzọ dị irè karị. N'ime ha, anyị na-ahụ ndị na-emekọrịta ihe site na mpaghara dị iche iche n'etiti ha. BBVA, oroma, mbara ala, Plume Labs, Nielsen, Schneider Electric, Waze ... bụ ụfọdụ ndị na-esonye na ọrụ a.
Anyị na-achọta Superlọ Ọrụ Supercomputing nke Barcelona (BSC), Ọ bụ ụdị nke anọ na usoro MareNostrum. Kọmputa dị ukwuu maka nyocha Data Nnukwu igodo n'ọtụtụ ubi, n'etiti ha bụkwa ọgụ maka Mgbanwe Ihu Igwe. E tinyere ya n'ọrụ na ngwụcha ọnwa Juun afọ 2017 a. Ọ bụ kọmputa nke atọ kachasị na Europe, etinyela ego na ya maka ntinye ya nde euro 34 site na Mịnịstrị nke Economy, Mmepụta na asọmpi nke Spain. O nwere ikike nke 14 Petabytes, ya bụ, nde 14 gigabytes. Ọ ruru 11,1 Petaflops, ya bụ, ajọ omume nke ijeri ọrụ 11.100 kwa nkeji.
Nnukwu data n’ọdịnihu nke ihu igwe na ndụ anyị
N'ụwa na-agbanwe agbanwe, ebe mgbanwe na-adị ngwa ngwa, ma bụrụkwa ihe ịtụnanya, ọ na-esi ike ịkọ ọdịnihu nke ihe. Ihe anyị ma n'ezie bụ na Nnukwu data abịawo, na amụma ndị ahụ mere ka ihu igwe na ebe ndị ọzọ na-enye anyị nsogbu. Fọdụ ga-anọgide na-enwe obi abụọ, ndị ọzọ ga-agọnahụ ya, ndị ọzọ ga-ahụ ya dị ka ihe tere aka. Mana eziokwu bụ na anyị na ya ebikọla.
Taa anyị maara na Big Data na-atụ anya ọtụtụ mmiri ozuzo, oge ajọ ifufe, na ọbụlagodi oke nkenke ọnụ ọgụgụ nke mba ga-emeri n'egwuregwu Olympic. Ọ na-atụkwa anya onye, ​​ebe na mgbe a ga-eme mpụ (ọ bụrụ na onye ọ bụla ahụla ihe nkiri "Minority Report" ọ gafere n'uche ha, nri?). Nnukwu data na-aga ngwa ngwa na-atụ anya ọdịnihu nke ọtụtụ mpaghara, na ọ bụ na ọbụlagodi Amazon na-amalite ịtụ anya ya, na nso nso a ọ malitere ibubata ọbụna tupu ndị ahịa azụta ihe. Ọdịnihu dị ruo taa, na-ejighị n'aka. Ma ọ na-agbanwe ọdịnihu buru amụma.
Anyị maara na ikike ya ga-eto. Knowsnye maara, ọ nwere ike ịbụ ọkụ ọkụ na-atụ anya onye na-atụ anya (Big Data) ihe. Ma na data zuru ezu, Nnukwu data ọ ga-enwe ike ịtụ anya ihu igwe ụwa na nnukwu atụmanya? Ee, dịka ị nwere ike ịtụ anya na omume anyị ga-enye ọnọdụ dị iche iche nye ndị enyere na mbụ, n'ihi na omume ọ bụla nwere nkuzi ya n'ọdịnihu, Big Data makwaara ya ma tụleghachi ya, na-enye ọhụụ ọhụrụ ọzọ.
Enwere ike ịtụ ihe niile anya. Ànyị ga-amata ihe ga-eme anyị n’oge na-adịghị anya? Olee nsogbu ndị anyị ga-eche ihu? Olee mgbe na ebee ka ifufe ga-efe? Kedu ihe anyị ga-anọgide na-edozi ya? Ka usoro dị iche iche na-akawanye mma, kọmpụta na-emeziwanye na arụmọrụ na ọsọ, mpaghara a na-aga n'ihu na-etolite ... O yikarịrị bụ na kama ịza "onye maara", ikekwe ihe kacha kwesị ekwesị ga-ekwu "ka anyị jụọ Big Data."
BA Ndị Mmekọ | Aha Mmelite | Ite
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Nnukwu data na ọdịnihu na amụma ihu igwe